Godina Wallagga bahaatti haallii tasgabbii rakko ta’aa dhufuusaatiin rakkachuusaanii jiraattonnii naannichaa ibsan - ዜና ከምንጩ
Godina Wallagga bahaatti haallii tasgabbii rakko ta’aa dhufuusaatiin rakkachuusaanii jiraattonnii naannichaa ibsan
Lamiileen lakkofsa heddu qaban ajjeefamuusaaniifii buuqqa’uun isaaniis ibsameera.
Naanno Oromiiyaa Godina Wallagga bahaatti rakkoon nageenyaa yaroodhaa yarootti babalachaa dhufee yaachiisaa isaanitti ta’uu jiraattonni naannichaa Addis Maaladaa waliin turtii taasiisan himan.
Yaroo garaa garaatti miidhaa humnoota hidhataniin isaanirra qaqaqbuun manaafii qabeenyaasaanii dhiisanii baqqachuuf saaxiluu isaanii kan dubatan jiraattota Aanaa Giiddaa Ayyaanaafii Haroo Limmuu kessumaa torbee dabarsinee rakiniichii heeddu babalachuusaa dubatu.Naanno kanatti gareewwan hidhataniin miidhaa qaqqabuun lubbuu namoota heddu ballesseera,qabeenyaan barbada’eera,namootiin manaaf qabeenyaasaanii gatanii baqqachuudhaaf saaxilaniiru jachuudhaan jirattonni kuun ibsaniiru.
Dhiyyenyattis Aanaa Haroo limmuu bakka Agamssa jadhamuuttilamiileen lakkofsii isaanii dhibba tokko caalan meeshaa gurgguddaadhaan ajjefamuu isaanii Addis Maaladaan buurqaawwan ishee irraa mirkaneesiiteetti.Alellaa kanaan lamiilee lubbu isaanii dhabaniitti dabalee Namootnni yaroof lakkofsii isaanii hin beekamnnee buuqqa’uu isaanii namootiin naannicha turan ijaan argan Addis Maaladaaf eeruu kenaniiru.
Yaaddo nageenya isaaniif qabaniin namootiin naanno sanaa maqaan isaanii akka hin ibsamnnee barbaadan akka ibsaniitti kessumaa maqaansaa addaa Angar Guuttin Aanaa Giddaa Ayyaanaa mandara ja’a nanno jadhamuutti torbee darbee lubbuun namoota heddu darbuusaa ibsaniiru.Namootiin 15 hiidhattotaan ergii qabamanii booda meeshaa sagalee hin qabneen akka ajjefaman yammu hubatan lagga dhiyenya isaaniitti jiru kessa seenanii lubbuun isaanii darbeera.Warreen lubbun isaanii darbee kessaa lamann isaanii miliiquuf yaalii taasiisaniin rasaasaan rukkutamanii lubbun isaanii kan darbbee yammu ta’u warreen hafan immo laga kessatti kufanii du’uu isaanii namootii naannichaa ijaan argan Addis maaladaatti himaniiru.
Naannichatti hiidhatee kan socho’uu ‘’Abo Shaneen’’aleellaan yaroo daddabalamaa lamiilee quulqqulluratti raawwattu baduu lubbutii amma barbadaa’u qabeenyaa akka ta’e kan dubbatan jiraattonn gareen hiidhataa kuun gochaa ajjeechaa gara jabiinaa ammana ga’u dhala namaaratti yammuu raawwatufii qabeenyaa yammuu saamuu motummaan fadaraalaas ta’ee qaamooleen nageenyaa naannichaa gargaarsa akkaakuu kamiiyyu taasiisuu dhabuun isaanii rakkiinicha akka baballisee dubataniiru.
Addis Maaladaan madden ragaa naannichatti argamann irra akka mirkaneesiiteetti rakiniichii babalachuusaafii hidhattonnis aleellaa daddabalamaa geessisuu isaaniitiin qoonaan bulttoonni naannichaa hoomisha isaanii walitti qabachuu dadhabanii nannicha gad dhisanii bakka garaa garaatti bittinaa’uu isaaniifii yaroo ammaas lubbun isaanii haala yaachiisaa iratti akka argamu beekuun danda’ameera.
Jirattonni kessumaammo qaamooleen nageenyaa tokko iyyuu nannichatti argamuu dhibuu ibsanii namootii ajjeefaman awwaaluun rakkisaa akka itti ta’eefii miidhaan isaanirra ga’aa jiruu cimee itti fufuusaafi furmaata dhabuun isaanii yaaddessaadha jadhaniiru.
Aanaa Giiddaa Ayyanaa bakka Angar Guutiin jadhamuutti miseenssonni humna hidhataa kanaa beleddota qoonaan bultoota kanaa saamuudhaanifii bakka Arquumbbii mandara sadii jadhamuuttiis haaluma wal fakkaatuun beleddota saamanii tiikee mataasaaniitiin eegsiifachaa jiraachuu isaanii minddesanii eegsiifachaa jiraachuu isaanii jiraattonni naannichaa Addis Maaladaan dubbifte ragaa ba’aniiru.
Bulchiisii magaalaa Guuttin rakkinichii humna kootii oliidha jachuudhaan jiraattonni akka of eegan dubbachuusaa kan ibsan yaada kennitoonni hojjattonni motummaa kanneen biraafii itti gaafatamttonni hojii motummaa naannicha gad dhiisanii ba’aa jiraachuu isaanii Addis maaladaatti himaniiru.
Addis Maaladaan dhimmicha iratti Motummaa Naanno Oromiiyaa irraa deebii argachuuf ittii gaafatamaa dhiimoota komuniikeshinii naannichaa Getaacheew baalchaatti yaroo daddabalamaa ergaa bilbilaafii bareefamaa yoo ergitees deebii argachuu hindandenye.
Total views : 7504627